म्युचुअल फन्ड ल्याउँदै छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता म्युचुअल फन्ड ल्याउँदै छौं
on: २५ बैशाख २०७६, बुधबार ०६:४२ अन्तरवार्ता
सुशील महर्जन, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल क्यापिटल मार्केट
सिभिल क्यापिटल मार्केटका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील महर्जन वित्तीय क्षेत्रमा विगत १३ वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनले ८ वर्ष क्यानेडियन इम्पेरियल बैंक अफ कमर्श र न्यूयोर्क स्थित द बैंक अफ न्यूयोर्क मिलोनको संयुक्त लगानीमा रहेको सीआईबीसी मिलोन, क्यानडामा एसेट सर्भिसिङ प्रमुखका रूपमा काम गरे । साथै उनले आरपीएम टेक्नोलोजीको वेल्थ म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर र टोरोन्टो डोमिनियोन बैंकको वेल्थ म्यानेजमेन्ट–म्युचुअल फन्ड अपरेशन्समा पनि काम गरे । उनी सिभिल क्यापिटलको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा २ महीनादेखि कार्यरत छन् । यसअघि उनी यसै कम्पनीमा उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । प्रस्तुत छ, सिभिल क्यापिटल मार्केटका कार्यक्रम तथा आगामी योजनाबारे महर्जनसँग आर्थिक अभियानकी सुप्रिम तिवारीले गरेको कुराकानीको सार :
सिभिल क्यापिटल मार्केटले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ? आगामी योजना के के छन् ?
अहिले हामी आरटीएस (रजिस्ट्रार टु शेयर) र आरटीए (रजिस्ट्रार टु ट्रान्सफर एजेन्ट)का रूपमा कार्य गरिरहेका छौं । आवश्यकताअनुसार इस्यू म्यानेजरको काम पनि गर्ने गरेका छौं । यससँगै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि गर्न थालेका छौं । विगतका दिनमा भन्दा हाल पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा निकै सुधार भएको छ । आज हामीले ४५ करोडसम्मको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । ग्राहकहरूलाई सहज गराउने किसिमका सुविधामा बढी केन्द्रित भइरहेका छौं ।
यसबाहेक हामीले ग्रान्डी र मेडिसिटी हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर ग्राहकलाई सुविधा प्रदान गरिरहेका छौं । खातावालालाई हस्पिटलमा छूट दिन थालिएको छ ।
यसैबीच अब चाडै नै हामीले हाम्रो पहिलो म्युचुअल फन्ड पनि ल्याउन लागेका छौं । यसका लागि लगभग सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् ।
पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा के के गरिरहनु भएको छ ?
पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा हामी निकै मिहेनतका साथ अघि बढिरहेका छौं । यसमा बजार प्रवद्र्धनका कार्य भइरहेका छन् । यससँगै हामीले अन्तरव्यक्ति कुराकानी (वर्ड अफ माउथ)मा पनि जोड दिइरहेका छौं । घटिरहेको बजारमा पनि हाम्रा ग्राहकको पोर्टफोलियो सकारात्मक नै देखिइरहेको छ । सम्भव हुने क्षेत्रमा लगानी गरी प्रोफिट बुक गरेर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।
यस्तो लगानीको जोखिम व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ?
नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण र कम्पनीहरूको अवस्था हेरेर लगानी गरिदिने गरेका छौं । दीर्घकालीन लगानी त छँदै छ, अहिलेको घटिरहेको बजारमा शर्ट सेलिङ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, जोखिम कम गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेका छौं ।
धितोपत्रमा भइरहेको प्राविधिक विकासले मर्चेन्ट बैंकरहरूलार्ई कत्तिको सहज बनाएको छ ?
धेरै नै सहज बनाएको छ । विगतका दिनमा जस्तो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था हटेको छ । सीडीएससीले डिम्याट र मेरो शेयर सुविधा ल्याएपछि शेयर कारोबार धेरै सहज र सरल भएको छ । अहिलेको यो प्राविधिक सुविधा तथा प्रयोगकर्ता बढिरहेको बेला नियामक निकायहरूले प्राविधिक विकास गर्न थालेपछि कम्पनी तथा ग्राहकलाई निकै सहज गराएको छ ।
अहिले डिम्याट खाता व्यवस्थित गरी कारोबार भइरहेको अवस्थामा सिभिल क्यापिटलमा भौतिक शेयरको अवस्था के छ ?
डिम्याट खाताले कारोबार गर्न निकै सहज भए पनि धेरै लगानीकर्ताले भौतिक शेयरलाई अभौतिकीकरण गराइसकेका छैनन् । हाम्रो आरटीएस क्लाइन्ट ११ ओटा छन्, जसमा कुल लगानीकर्ता ६ लाख छन् । तीमध्ये २ लाख लगानीकर्ताका भौतिक शेयर अझै पनि खातामा रहेका छन् । र, ४ लाख शेयर भने अभौतिकीकरण भइसकेका छन् । अहिले पनि अभौतिकीकरण गराउन आउनेहरूको काम भइरहेको छ ।
मर्चेन्ट बैंकहरूको कार्य सहज बनाउन तथा व्यापार बढाउन धितोपत्रको निष्कासन तथा व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा के सुधार आवश्यक छ ?
अहिलेको समय भनेको डिजिटलाइजेशनको नै हो । नियामक निकायले यस क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्दै आएको त छ । तर, प्राविधिक उपकरणहरूलाई अझ बढी विकास र सुधार गरेर अगाडि लैजानुपर्नेछ । साथै, मर्चेन्ट बैंकहरूमा धेरै कर्मचारीभन्दा पनि शीप भएका कर्मचारीको आवश्यकता छ । पहिले फाइलिङ गर्ने, स्टेपल गर्ने, इन्ट्री गर्ने सबै कामका लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी हुने गर्थे, जुन अहिले एकैजनाले गर्न सक्छ ।
अहिलेको शेयर बजारको ट्रेन्डलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ ?
अहिलेको बजार शर्ट रनको हो । नेप्से परिसूचक छिनको छिनमै घट्ने–बढ्ने भइरहेको छ । लगानीकर्ताले पनि दीर्घकालीन हिसाबमा सोचेको देखिँदैन । बजारको यस्तो अवस्था रहँदा पनि लगानीकर्ता यसलाई नाफा सुरक्षित गर्ने हिसाबले गइरहेका छन् । अहिलेको बजारले पनि शर्ट सेलिङ नै खोजिरहेको जस्तो देखाइरहेको छ ।
तपाईंहरू पनि खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ । यसमा के भइरहेको छ ?
हामीले पहिला बन्दमुखी म्युचुअल फन्ड ल्याउन लागेका हौं । त्यो फ्लोट भएपछि मात्र खुलामुखीतिर लाग्नेछौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हेर्दा बन्दमुखी भन्दा खुलामुखी फन्ड बढी फ्लोट हुन्छ । बन्दमुखीमा निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । धेरैजसो स्किमको समय ५ देखि ७ वर्षसम्मको हुन्छ । परिपक्व भएपछि विक्री हुन्छ र कारोबार बन्द हुन्छ । तर खुलामुखी फन्डमा भने निरन्तर कारोबार भइरहन्छ । यस्तो फन्डका लगानीकर्ताले आफूले चाहेको समयमा इकाइहरू किन्न वा बेच्न सक्छन् । खुलामुखी फन्डमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापकलाई चुनौती बढी हुने भए पनि यो लगानीकर्तामैत्री बढी हुन्छ । यसको दैनिक एनएभी प्राइसिङ हुन्छ । यसमा निश्चित प्रतिशतका हिसाबले कोष रकम ‘मेन्टेन’ गरिराख्नुपर्छ । र, यो फन्ड हाउस र ट्रस्टीले नै मेन्टेन गर्छन् ।
२३ बैशाख २०७६, सोमबार ०५:३८
सिभिल क्यापिटल मार्केटको विशेष साधारण सभा
१३ चैत्र २०७५, बुधबार ११:३३
३० पुष २०७५, सोमबार ०५:४२